ရိုက်ဖူးသမျှ ပန်းနာမည်တွေနဲ့ ရုပ်ရှင်တွေအတွက် ဂျင်းအင်္ကျီမှာ ပန်းချီရေးပေးခဲ့တဲ့ မေမေ့လက်ရာ အင်္ကျီလေးနဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် အစီအစဉ်တစ်ခုပြုလုပ်နေတဲ့ ဖွေးဖွေး – Cele Snap
ရိုက်ဖူးသမျှ ပန်းနာမည်တွေနဲ့ ရုပ်ရှင်တွေအတွက် ဂျင်းအင်္ကျီမှာ ပန်းချီရေးပေးခဲ့တဲ့ မေမေ့လက်ရာ အင်္ကျီလေးနဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် အစီအစဉ်တစ်ခုပြုလုပ်နေတဲ့ ဖွေးဖွေး
နိုင်ငံကျော် မင်းသမီးလေး ဖွေးဖွေးကတော့ အနုပညာသက်တမ်း (၁၃) နှစ်ကျော်မှာ ကောင်းသတင်းတွေနဲ့သာ ကျော်ကြားခဲ့သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကို မရိုးနိုင်တဲ့ ခံစားမှုရသတွေကို ချပြနေတဲ့ ဖွေးဖွေးကတော့ သူမကိုယ်သူမ အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေထိုင်ပြီး အသစ်အဆန်းတွေကို အမြဲတစေ ချပြနေသူတစ်ယောက်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ဒီတစ်ခါမှာလည်း ဖွေးဖွေးက ပရိသတ်တွေအတွက် ထူးခြားတဲ့ အရာလေးတစ်ခုကို ချပြဖို့ ကြိုးစားနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖွေးဖွေးကတော့ သူမရဲ့မေမေ ဒေါ်သိင်္ဂီစံထွား ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲထားတဲ့ ပန်းပန်းချီ ဂျင်းအင်္ကျီလေးနဲ့ ရိုက်ကူးရေးလုပ်နေပြီး “အ​မေ က ​ဖွေး ရိုက်ခဲ့သမျှ ပန်း နံမည် နဲ့ ရုပ်ရှင်​တွေ အတွက် Jean မှာ ပန်းချီ​ရေး​ပေးခဲ့တယ်။ မထွက်​သေးတဲ့ရုပ်ရှင်ထဲက ပန်း​တွေလဲပါတယ်ရှင့် ….🌼🏵🌸🌹💐🌻🌺 Btw Tmr X’mas မှာ အထူး အစီအစဉ်​လေးနဲ့ အတူ ပြန်လာပါမယ် ရှင့်! Peaceful X’mas Eve & May God Bless you all… Stay Tuned My Darlings & Oopsies! 👀😻💕💝” ဆိုကာ ရိုက်ကွင်းပေါ်က အမှတ်တရကို အခုလိုပဲ မျှဝေပေးလာခဲ့ပါတယ်။
ဖွေးဖွေးကတော့ ဒီကနေ့ ခရစ္စမတ်နေ့မှာ အထူးအစီအစဉ်တစ်ခုနဲ့ ပြန်လာမယ်လို့ ပြောလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ဖွေးဖွေးပြောတဲ့ ခရစ္စမတ်အထူးအစီအစဉ်ဆိုတာ ဘာလဲ ရင်ခုန်စွာနဲ့ စောင့်မျှော်ပေးကြပါဦးနော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
နိုငျငံကြျော မငျးသမီးလေး ဖှေးဖှေးကတော့ အနုပညာသကျတမျး (၁၃) နှဈကြျောမှာ ကောငျးသတငျးတှနေဲ့သာ ကြျောကွားခဲ့သူတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှကေို မရိုးနိုငျတဲ့ ခံစားမှုရသတှကေို ခပြွနတေဲ့ ဖှေးဖှေးကတော့ သူမကိုယျသူမ အမွဲတမျးပွောငျးလဲနထေိုငျပွီး အသဈအဆနျးတှကေို အမွဲတစေ ခပြွနသေူတဈယောကျဆိုလညျး မမှားပါဘူး။ ဒီတဈခါမှာလညျး ဖှေးဖှေးက ပရိသတျတှအေတှကျ ထူးခွားတဲ့ အရာလေးတဈခုကို ခပြွဖို့ ကွိုးစားနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဖှေးဖှေးကတော့ သူမရဲ့မမေေ ဒျေါသိင်ျဂီစံထှား ကိုယျတိုငျရေးဆှဲထားတဲ့ ပနျးပနျးခြီ ဂငျြးအကငြ်္ီလေးနဲ့ ရိုကျကူးရေးလုပျနပွေီး “အ​မေ က ​ဖှေး ရိုကျခဲ့သမြှ ပနျး နံမညျ နဲ့ ရုပျရှငျ​တှေ အတှကျ Jean မှာ ပနျးခြီ​ရေး​ပေးခဲ့တယျ။ မထှကျ​သေးတဲ့ရုပျရှငျထဲက ပနျး​တှလေဲပါတယျရှငျ့ ….🌼🏵🌸🌹💐🌻🌺 Btw Tmr X’mas မှာ အထူး အစီအစဉျ​လေးနဲ့ အတူ ပွနျလာပါမယျ ရှငျ့! Peaceful X’mas Eve & May God Bless you all… Stay Tuned My Darlings & Oopsies! 👀😻💕💝” ဆိုကာ ရိုကျကှငျးပျေါက အမှတျတရကို အခုလိုပဲ မြှဝပေေးလာခဲ့ပါတယျ။
ဖှေးဖှေးကတော့ ဒီကနေ့ ခရစ်စမတျနမှေ့ာ အထူးအစီအစဉျတဈခုနဲ့ ပွနျလာမယျလို့ ပွောလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး ဖှေးဖှေးပွောတဲ့ ခရစ်စမတျအထူးအစီအစဉျဆိုတာ ဘာလဲ ရငျခုနျစှာနဲ့ စောငျ့မြှျောပေးကွပါဦးနျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Tik Tok အကလေးနဲ့အတူ ပရိတ်သတ်တွေကိုအချစ်တွေပိုလာအောင်ချပြလာခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချောလေး M ဆိုင်းလု…